Abafazi / Amantombazana Fairy zekhephu ezinithiweyo zizihlangu zoboya zeNdlu eQhelekileyo yezihlangu - Goodao Technology Co, Ltd.
Abafazi abaqhelekileyo beCowsuede Clog Slipper ekuMgangatho oPhezulu weCom
Uyilo olulodwa China New 2020 Quality High Drivi ...
I-Mens Cowsuede Moccasin Slipper Mens Felt yeVenetian uGqr ...
Abafazi / Amantombazana Fairy zekhephu ezinithiweyo Zithambeka uboya bendlu eyiNdlu
Umzekelo NO.: BLM2163
Min. Order / FOB Ixabiso laseShanghai
Iibini ezingama-2,000 ze-US $ 3.08-3.38 / ngababini
Umbala: Mhlophe / Bomvu / Ngwevu
Ubukhulu: Abasetyhini kuthi6-11 #
Imiqathango Intlawulo: L / C, T / T,
Ngasentla: UKWAZI UKHUSELEKILE
Umaleko: Ubumdaka beFaux ethambileyo
Ukupakisha: 1pr / polybag; j-hook / ibhokisi yebhokisi
Ikhowudi ye-HS: 6404190000
Ikheyibhile ingaphezulu kwephambili, ukubukeka okuhle kunye nokuthamba. I-outsole ebunjiweyo yomelele kunye nokubambeka; Ubuninzi be-EVA yodwa, ithambile kwaye ayisindi. -Umngundo weenyawo ezinamakhanda onyawo ukuze ulunge ngokugqibeleleyo; ilungele ukunxiba imini yonke. -Kulungele ukusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle. -Ilungile kwaye ihlala ihambelana nemeko. -ISuper e-comfy insole yoboya. -Ukuhlala kwerabha yodwa ukuze uhlale ixesha elide.
Abancinci baya kuthanda ukudibanisa nezi Kniti zeClog Slippers! Iinsoles ze-foam zeSupersoft ziyabagcina bonwabile, ngelixa izinto ezingaphandle zangaphakathi / zangaphandle zibonelela ngenkxaso efuneka kakhulu ngexesha lokudlala.
● Irabha yodwa
● AMANQAKU: Ezi ntyatyambo zintombazana zilungile kwaye ziyilelwe nge-Ultra Comfort Fur Insole kunye ne-non-Skid outsole ebunjiweyo yokubonelela ngokuhamba ngokulula nangokukhuselekileyo ngenkxaso eninzi.
● Imibala inkosazana yakho iya kuyithanda: Iyafumaneka ngeMnyama, Ngwevu, okanye abanye; Wonke umntu wenza izinto.
● UKUTHUTHUZELWA NGOKUPHELELEYO: Ezi slippers zilula kakhulu kwaye zicocekile, umphandle onithiweyo uthambile kwaye ukhululekile, i-insole yoboya iya kuqinisekisa ukuba iinyawo zihlala zifudumele kwaye zirhabaxa.
● Ilungele ukusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle, unyaka wonke. ulounge ujikeleze indlu nabo okanye uhamba phantsi esitratweni.
Kutheni ukhetha thina:
Umzi-mveliso wethu unamava amahle okuvelisa i-Cow-suede moccasin kunye neslipper. Kwaye sinexesha elide abathengisi bezinto ezisebenzisanayo, bakhethekileyo kwingingqi yabo, ukulawula umgangatho kunye namandla azinzileyo nawo. Siqinisekisa ukuba iimveliso zethu zinokuhlangabezana novavanyo lwe-CA 65 kunye ne-AZO kunye neChannel VI yasimahla. Siyakholelwa xa kuthelekiswa nexabiso eliphantsi, uMgangatho olungileyo kunye nezinto zempilo zibaluleke ngakumbi kumthengi. Uninzi lweemveliso zinentengiso yeempahla e-UK nase-USA; sinesebe lethu loyilo kunye neQela, linokukunceda ukuba uphuhlise izihlangu njengoko isicelo sakho sokwenza imveliso yakho zikhethekile nezinye. Kwaye sinokucebisa iingcebiso zethu zobungcali zoyilo kunye nezinto ezikhethiweyo ngokusisiseko kumava ethu.
Egqithileyo Inqaku elipholileyo labasetyhini beSlippers Slippers Fuzzy Wool-Like Plush Fleece Lined House Shoes w / ngaphakathi, Ngaphandle kwe-Anti-Skid Rubber Sole
Okulandelayo: Abafazi Slippers Plush iZilayidi Fuzzy SPA House Slippers
1.Are Trading Inkampani okanye umenzi?
A: Singumzi-mveliso kunye nenkampani yokurhweba
2.Yintoni eyona ntengiso yakho iphambili?
A: Ubukhulu becala iYurophu neMelika, emva koko ibe nguMzantsi Afrika kunye noMzantsi mpuma weAsia.
3.Yintoni eyona mveliso yakho iphambili, kwaye wenza enye into?
A: Sigxiliswe kwizitishi zangaphakathi, ii-moccasins, iibhutsi, iimbadada, nezinye izihlangu zabantu abadala nabantwana.
Kwintlawulo yesampula kunye nemithwalo, ungayithumela kwiakhawunti yethu ye-Paypal.
Kwiiodolo eziqhelekileyo, siyayamkela i-T / T 30% yedipozithi, intsalela ekufuneka ihlawulwe ngokuchasene nekopi ye-B / L.
Kuthatha ixesha elingakanani ukwenza isampulu:
Iintsuku 7-10 ukuba senza isampuli entsha kuwe.
Ukuba ukhetha nje isampulu esele ikho, sinokukuthumelela isampuli ngosuku olulandelayo.
Iintsuku ezingama-35-45, kuxhomekeke kubungakanani kunye nemveliso ngokwayo.
Sinesebe lokuthenga eliqeqeshiweyo lokugcina imarike ngalo lonke ixesha Ukuqinisekisa ukuba singafumana elona xabiso libalaseleyo lezinto eziphathekayo.
Iqela QC kwiishifti ezimbini, nto leyo ukulawula umgangatho ngokungqongqo.
3. Abasebenzi boYilo lobungcali
Sigxininisa kuyilo lwe-ODM / i-OEM.Umyili wethu unokukunceda ukusombulula yonke ingxaki.Usixelele nje umbono wakho woyilo ulungile.
Ukupakisha kunye nokuhambisa ngenqanawe:
Isibini esinye kwiPolishi enye, isibini esili-12/18/24 kwibhokisi enye
Singanikezela nge-hangtap, i-hanger kunye nebhokisi yombala yokupakisha, ukuba unesicelo esikhethekileyo sixelele nje ukuba kulungile.
Zaziwa ngokuba ziClog Slippers
Abafazi abaThambileyo beFaux Fur Thong Slipper
Slippers yabasetyhini Plush iZilayidi Fuzzy SPA H ...
Abafazi Girls Fairy zekhephu ezinithiweyo Slippers F ...